> Resource > iPhone > Sidee Macdan Photos ka kaabta iPhone in Wondows / Mac OS X
Photos Ujrooryinka kaga imaanayo Lugood ah
Nasiib darro aniga iPhone jebiyey. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin ayaan u synced la Lugood dhawaan, si aan qabo gurmad Lugood ah ee xogta oo dhan on my computer. Sidee baan u arkaan ama dib u helidda sawiro ka gurmad iPhone? Ma ahan in aan iPhone kale, iPad ama iPod oo ka arki kartaa sawirada. Waxaan hubiyaa aan xisaab iCloud oo kuma jiraan sawirrada. Shifo jawaabo kasta!
No arrinta sababta waxa ay tahay, Apple ma ogola qof aad u aragto Lugood gurmad content, ilaa aad si buuxda loo soo celiyo si aad qalab Apple. Si taas loo gaaro, waxaad u baahan tahay si aad u hesho qalab saddexaad-qayb ka caawiyay inay soo saaro gurmad ugu horeysay, sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo saaro gurmad ah iPhone oo dhan u eegis xushay iyo soo kabashada. Taasi waa in la yidhaahdo, aad furfurmi Macdan kartaa sawiro ka gurmad iPhone in Windows ama Mac OS. Waxa kaliya ee aad qaadataa saddex tallaabo. Aynu wada hubiyo.
Tallaabada 1. Download software iPhone gurmad shawladda
Version maxkamad wuxuu kuu ogol yahay inay soo saaro oo ku eegaan dhammaan xogta ku gurmad iPhone lacag la'aan. Just download it oo ay leeyihiin isku day ah oo keligaa.
Tallaabada 2. Run barnaamijka Macdan sawiro ka gurmad iPhone
Halkan, aynu qaadan version Windows sida tusaale. Users Mac sidoo kale raaci kartaa tallaabooyinka hoose. Waxa ay la mid.
Ka dib markii ay ku rakibidda barnaamijka on your computer, waxa maamula oo taga si ikhtiyaar ah ee ka soo kabsado Lugood ee kaabta File . Markaas barnaamijka si toos ah ogaadaa kartaa dhammaan iPhone gurmad files jira on your computer iyo iyaga muujin doonaa idinka soo hor jeedda sida liiska.
Next, waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay doortaan gurmad aad iPhone. Haddii ay jiraan wax ka badan hal, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah taariikhda dhawaan ugu horeysay. Markaas riix Start Scan badhanka si ay u helaan waxa ay soo bixiyay.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh photos in gurmad iPhone iyo kabsado iyaga
Geedi socodka soo saarida aad ku kici doona ilaa 10 ilbiriqsi ee ugu. Marka la joojiyo, aad sabab u scan heli doontaa oo dhan xogta in gurmad si faahfaahsan, oo aad ku eegaan karo wax kasta waa mid ka mid ah oo ay ka mid. Wixii sawiro, waxaad dooran kartaa Camera Roll oo Photo Stream. Sax wax kasta oo aad rabto inaad xajisaan oo guji badhanka uu soo kabsan iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.
Haddii aad isticmaasho version Mac ah, tallaabooyinka la mid yihiin mid aad. Waxa kale oo aad samayn kartaa sida ay tallaabooyinka kor ku xusan oo dhan. Waa maxay sababta aan isku dayaan hadda?